mubvunzo FSX Weather
1 gore 2 ago #854 by Dariussssss
Nokuda kwechimwe chikonzero, hupenyu hwehupenyu huripo pane FSX yangu hwakashata. Haisi kungoita zvakaipa, asi hapana nzvimbo iri pedyo nechechokwadi, kana kuti yakarurama kune dzimwe nzvimbo dzepamusoro. Pari zvino, dzakawanda dzezvikepe zvekuEurope dziri kutarisana nekukanganisika nekuda kwechando chakakura.
Nokuda kwepfungwa, EHAM Amsterdam..inechokwadi, mamiriro okunze ndeokuti:
Mhepo 16 kt kubva kuNorth
Kupisa 1 ° C
Kushingaira 972 hPa
Kuonekwa: 4000 m
Zuva rakaparadzana pa400 ft
Overcast kuri 700 ft
(chiedza) chando mbeu
MuFSX, nenzira yakasiyana. Denga rose, mhepo yakasiyana uye inodziya .... chii icho hero? Pane nzira ipi neipi yakapoteredza iyo?
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: Luc57
1 gore 6 mazuva apfuura - 1 gore 6 mazuva apfuura #941 by DRCW
Iyo injini yeIndaneti yebhokisi yebhokisi yeFSX haibatsiri naJespen anokupa mamiriro okunze aripo. Ini ndingadai ndichifunga kuti ichiri kuitirwa Steam Edition yakapiwa Dovetail vane kambani navo. Basa racho harisunungurwi neDovetail. Sezvakangoita iye zvino FSW haisati iine inoshandiswa yekushanda injini kana wechitatu wekugadzirisa unogona kutenga imwe kubva. Nzira chete yekuwana nyika chaiye yekudenga yeFSX Boxed edition, ndeyokutenga imwe yakafanana neAlex Sky 2016
11 mwedzi 2 masvondo apfuura #1013 by vafambi
Ndakatora purogiramu yemamiriro emhepo isina kusununguka - yakawanda uye inokonzera mamiriro ekunze mahara kune FSX - FSXWX.
Iwe haufaniri kuisa. Runza chirongwa cheFSXWX apo uri muFSX.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: DRCW
11 mwedzi 2 masvondo apfuura #1014 by Dariussssss
Nzvimbo yacho haigone kuwanikwa ..... mukushandura, akafa link.
9 mwedzi 3 masvondo apfuura #1063 by vafambi
Hi Dariussssss. Hazvizivi kuti iwe unorevei. Link inoratidzika kunge iri kushanda kwandiri ikozvino.
Zvichida iyi, (iyo yakakonzerwa chaiyo inogona kuwanikwa) .... www.plane-pics.de/fsxwx/instructions-fsx.htm
9 mwedzi 3 masvondo apfuura #1064 by Welsheagle
Iko kubatana kunoshanda kwandiri asi ini ndinogona kukurudzira www.fsrealwx.net/
Ndinoshandisa uye inokupa iyo chaiyo yemamiriro ezvinhu .. nguva dzose.
Iwe unogona kushandisa shanduro yakasununguka kana kuvandudza kune pro.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: vafambi
Time chokusika peji: 0.237 mumasekonzi